Safidy… andraikitra | NewsMada
Raikitra indray ny fampielezan-kevitra… Tsy miverin-dalana ny fiainam-pirenena. Malalaka kokoa ny olom-pirenena amin’izao: kandidà roa sisa isafidianana. Efa samy teo amin’ny fitondrana izy ireo. Mila dinihina sy hanapahan-kevitra amin’izao àry izay foto-kevitra ijoroany avy, ny vinam-piarahamonina hampivaingana izany, ny fandaharanasany hahatongavana amin’izany, ny fomba fiasa hanatanterahana azy…
Andraikitra takina amin’ny kandidà sy ny mpomba azy ny manazava sy mandresy lahatra ny mpifidy amin’izany fa tsy vitan’ny fihetsiketsehana fotsiny. Tsy zazabodo na bado ny vahoaka ka tsy hahalala sy hahay hanavaka ny azo tanterahina sy ny mety ho vita. Tsy tokony hahagaga fa mila zaikana, ohatra, rehefa tsy araka izay nampanantenaina izay hiainan’ny vahoaka: mety hisy ny fitarainana, ny fitsikerana, ny hetsika…
Ny hataon’ny tena ihany no hahasoa na haharatsy. Mba ho araka ny fanamby ampanantenaina tokoa ny hatao fa tsy maika ny ho voafidy sy hahazo fitondrana fotsiny. Andrao hosoketaina sy hoenjehina ho fahavalom-pirenena sy mpanongam-panjakana, ohatra, izay rehetra mitaraina, mitsikera, manohitra… Ny amisavisana ny ratsy, hiavian’ny soa. Mpifankatia tsy mifamarafara, ady no farany. Aleo mijery lavitra.
Fifanarahana sosialy eo amin’ny vahoaka sy izay fidiny hitondra ny fifidianana. Amin’izany, tsy maintsy manaja ny fanamby sy ny teny nomeny tamin’ny fampielezan-kevitra ny mpitondra. Etsy andaniny, mila manara-maso akaiky sy mitohy izay fanatanterahan’ny mpitondra ny fampanantenany ny vahoaka. Mitaky tamberin’andraikitra ny fampindramam-pahefana amin’ny fifidianana fa tsy fandatsaham-bato fotsiny.
Safidy… andraikitra izay, na eo amin’ny kandidà ho mpitondra na eo amin’ny vahoaka mampindrana fahefana amin’ny alalan’ny fifidianana. Mila tadidina ary hampahatsiahivina amin’ny kandidà ho mpitondra àry izay ambaran’izy ireo amin’izao fampielezan-kevitra izao: izay miteny be, hitakiana be. Mba hisy dikany sy lanjany ny fifidianana: ho amin’ny fiainana tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha.